Axmed Max’ed Islaam (Axmed Madoobe) oo loo doortay Madaxweynaha Jubbaland
Kismaayo:-War haatan naga soo gaaray magaalad Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa sheegaya in goordhow la soo afmeeray doorashadii madaxweynah Jubbaland. waxaana si weyn loo adkeeyey amaanka Garoonak diyaaradaha ee magaalada Kismaayo iyo dhamaan xarumaha Maamulka KMG ee magaalada Kismaayo.
Ilo wareed lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa u sheegay Halgan.net doorashada Madaxweynaha Maamulgobaleedka Jubbaland uu si weyn ugu guuleystay Sheekh Axmed Max’ed Islaam (Axmed Madoobe)
Madaxda DFS ayaa si aad ah u diidan dhismaha Maamulgobaleedka Jubbaland waxaana uu maanta magacaabay Raisulwasaaraha DFS Cabdi Faarax Shirdoon gudi ka kooban labada gole loona xilsaaray wada- xaajood ka iyo dib-u heshiisiinta gobalada Jubbooyinka kuwaas oo gaaraya ilaa 16 xubnood.
Maamulka KMG ah ee magaalada Kismaayo iyo waxgarad iyo siyaasiyeen ka soo jeeda gobalada Jubooyinka iyo Gedo ayaa waxaa ay ku adkeysanayaan in ay xaq u leeyihiin in ay dhismtaan maamul u gaar ah dustuurkana uu u fasaxay .
Khilaafka DFS iyo Maamulka KMG ayaan la aqoon halka uu ku biyo shuban doono hadii dhidibada loo aaso maamul gobaleedka Juba Land oo maanta la doortay Madaxweynihii
Waxaa wili hawada ka maqan Isgaariinta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose maalintii labaad waxaana ay saraakiisha amaanka arinkaas ku macneeyeen sugida amaanka .
Warka oo Faahfaahsan dib baan idiinka soo gudbin doonaa inshalaah.